कोरोना लाग्छ भन्दै भाडामा बस्‍ने नर्सलाई घरभेटीले घोक्राउँदै निकाले ! दाङ बाट यस्तो भिडियो आयो (भिडियो हेर्नुस) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
कोरोना लाग्छ भन्दै भाडामा बस्‍ने नर्सलाई घरभेटीले घोक्राउँदै निकाले ! दाङ बाट यस्तो भिडियो आयो (भिडियो हेर्नुस)
बिरामीको उपचारमा खटिएकी नर्सलाई डेराबाट निकाल्ने घरभेटी पक्राउ परेका छन् । नर्सलाई घरबाट निकालेको आरोपमा एक जना घरधनी पक्राउ परेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–२ का वडासचिव नारायण आचार्य रहेका छन् ।
कोरोना भाइरस सर्ने भन्दै उनले आफ्नो डेरामा बस्दै आएकी आएकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १६ गणेशपुरकी नर्स सिर्जना खड्कालाई निकालेको प्रहरीको आरोप छ । दाङका प्रहरी प्रवक्ता सुमित खड्काले आरोपबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताए । प्रहरीका अनुसार वडा सचिव आचार्यले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस
नेपालीको पक्षमा बोलेकी मनिषा यस्ता कारणले गर्दा भैरहवा नाका हुँदै नेपाल आइन (भिडियो हेर्नुहोस)
चलचित्र अभिनेत्री मनिषा कोइराला मंगलबार रुपन्देहीको सीमानाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल प्रवेश गरेकी छिन् ।परिवारका सदस्यसहित
यि हुन भारतबाट घर हिंडेका बेला बाकेमा गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने एकै परिवारका बाबु आमा र छोरा
काठमाडौं- बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका(२ ठुरिया जंगलमा आइतबार राति भएको सवारी दुर्घटनामा परि पश्चिम दाङको
समिर खान र अमृता भट्टको फिचरिङमा ”आइफोन बाटै देउन चुम्मा ” (भिडियो)
मोडल समिर खान र अमृता भटटको फिचरिङमा रहेको ”आइफोन बाटै देउन चुम्मा गीत युटुव मार्फत
नेपाली सागीतिक क्षेत्रमा सुन्दर तस्बिर बनाउन सफल भएकी गायिका सृजु अधिकारी आज भोली निरन्तर लक